VONDRONA TENY GASY 2.0 : Hanolotra fiofanana ho fankalazana ny « teny ibeazana »
Mitohy hatrany ny fampitiavana ny Teny malagasy ataon’ny vondrona Teny Gasy 2.0, tamin’ ny 23 novambra 2019 ny andiany voalohany tamin’ny fampiofanana nataon’izy ireo ka efa miditra amin’ny andiany faharoa indray izy izao. 22 janvier 2020
Hampanao fiofanana momba ny fikirakirana ny aterineto sy fampiasana ny Teny malagasy etsy amin’ny Ivo-Kolo CEMDLAC indray ny vondrona Teny Gasy 2.0 ny sabotsy 08, 15, 22, ary 29 febroary ho avy izao amin’ny 2 ora tolakandro ka hatramin’ny 5 ora hariva. Hetsika izay eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina, entina hankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny tenin-dreny na teny ibeazana izy ity.
Hita tokoa tato ho ato fa efa mihamaro ireo Malagasy misehatra any amin’ny fampiasana aterineto, tsapa ho miha mitontongana anefa ny fahaiza-manoratra ny tenim-pirenentsika any amin’ireny tambajotran-tserasera ireny satria maro ireo mihevitra fa rehefa tafita ny hafatra tiana hambara dia mety izany ka tsy ilàna fitandremana sy fahafantarana ny fitsipika mifehy ny teny.
Misafidy ny hizara fahalalana amin’ny teny vahiny koa ny ankamaroan’ireo mpisehatra any amin’ny aterineto. Ao ny manambara fa tsy mahalaza hevitra ny Teny malagasy, ao ny manana fahasarotana amin’ny fanoratana ny Teny malagasy ka dia aleony mihitsy mampiasa teny vahiny. Ny fahatsapana izany indrindra no nanosika ny vondrona Teny Gasy 2.0 hampanao ny fiofanana, anomezana toromarika manokana momba ny fikirakirana blaogy sy ny fampiasana ny Teny malagasy any amin’ny tranonkala mba hahafahana manaporofo fa mahalaza zava-dalina ny tenintsika. 5000 Ariary ny fandraisana anjara ary azo atao ny mandefa izany amin’ny Mvola amin’ny laharana 0343679151.
Mampiofana matihanina amin’ny fikirakirana blaogy sy mpikaroka misehatra eo amin’ny tontolon’ny Teny malagasy no hitondra ny fampiofanana mandritra ireo andro ireo. Hisy koa ny mari-pitozoana hozaraina aorian’ny fiofanana.
VONDRONA TENY GASY 2.0
2020-01-22 13:16:27 par Andry N.T. RANDRIANARISOA
Tsara ny ezaka fampiofanana momba ny teny ibeazana toy izao, fa mba tiako raha miatomboka amintsika mpikarakara mihitsy ny ezaka, ka sao mba azo tsindriana mafimafy kokoa ny anaran’ilay CEMDLAC amin’ny Teny Malagasy, na ny anarana efa fiantso ny toerana amin’ny teny Malagasy no anazarana ny vahoaka.
misaotra indrindra .